नयाँ वर्ष बिदा को पूर्वसन्ध्या मा, धेरै उपहार आफ्नो साथी तथा आफन्तहरूले तयार के सोच्न थाल्छन्। ठूलो अद्वितीय आश्चर्य मोती बनेको एक हिमपात हुन सक्छ। तिनीहरूले पनि क्रिसमस ट्री लागि वा सामान्य मा एक विशेष घरमा एक सुन्दर सजावट रूपमा सेवा गर्छन्। तिनीहरूले पनि मेला रातको लागि पोशाक embroider गर्न सक्नुहुन्छ।
बुनाई मनके हिमपात अघि, तपाईं सामाग्री र उपकरण तयार गर्न आवश्यक छ। समयमा काम, सबै को पहिलो, विभिन्न रंग र रंग को मोती आवश्यक हुनेछ। अन्त परिणाम एक हिमपात हुनेछ देखि, तपाईं predominantly सेतो, पारदर्शी, चाँदी मोती र अन्य यस्तै रंग शेयर गर्न आवश्यक छ। साथै, बुनाई जो मा स्ट्रिङ मोती गर्न सूत्रको प्रयोग बिना पूर्ण छ। अन्यथा सबै प्रयास व्यर्थ हुनेछ, जब सम्म यो तोड्न छैन - तर, यो माछा मार्ने लाइन वा नायलन मुद्दा प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। हिमपात मोती embroider पनि एउटा सानो सुई आवश्यकता हो, जो को मोटाइ कैंची को मोती मा प्वाल को व्यास भन्दा कम र पक्कै हुनुपर्छ।
मोती को एक हिमपात कसरी बनाउने सिक्न, तपाईं आवश्यक कार्यशालाओं हेर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं आफूलाई सपना गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यहाँ केही काल्पनिक, र धैर्य र राम्रो हास्य धेरै छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। पाठ्यक्रम, कसैले कार्य सामना गर्न सक्षम हुनेछ एक हिमपात मनका सबैले थाहा कसरी बनाउने, तर। एक सुई को आँखा मार्फत मुद्दा थ्रेडिङ लागि एक मानक प्रक्रिया प्रदर्शन, तपाईंले काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
पाँच पङ्क्तिहरू तल उत्पादन वर्णन हुन्छन्। पहिलो प्रदर्शन गर्न, तपाईं बाह्र मोती को एक मुद्दा मा स्ट्रिङ गर्न आवश्यक र एउटा सर्कल तिनीहरूलाई लक। यो गर्न, सुई फिर्ता सारा श्रृंखला मार्फत पकड र पहिलो मनका मार्फत यसलाई बाहिर ल्याउन। समाप्त यो पहिलो श्रृंखला र दोस्रो उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। एक मुद्दा तीन मोती मा strung गर्न, र त्यसपछि तेस्रो मनका र उत्पादन को पहिलो पङ्क्ति मार्फत यो सूत्र। सबै सही गरेको छ भने, तपाईंले एक त्रिकोण प्राप्त। यो तीन टुक्रा को मात्रा मा मोती सङ्कलन र पहिलो पङ्क्ति को पाँचौं मनका मा स्ट्रिङ मुद्दा फेरि पछि छ। यसरी, यो छ ट्यूटोरियल गर्न आवश्यक छ। पहिलो र दोस्रो मोती मार्फत मुद्दा सम्झना गर्न श्रृंखला सुरक्षित। को पट्टी को अन्त पछि अर्को लागि अघि बढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यान्वयन को प्रविधी अनुसार यो अघिल्लो एक फरक छैन। मात्र फरक strung अनाज को संख्या मा छ। पाँच यस श्रृंखला र मुद्दा मा ट्यूटोरियल को शीर्ष मार्फत पारित गरिएको छ। दल साथै समाप्त हुन्छ: थ्रेड पहिलो र त्यसपछि दोस्रो मनका मार्फत बित्दै र बाहिर गर्न discharged।
अर्को, चौथो पङ्क्ति snowflakes को एक रे लागि आधारको रूपमा सेवा गर्नेछन् जो देखिने मतभेद छ। केही तीन मोती को स्ट्रिङ डायल गर्नुपर्छ प्रदर्शन गर्न, त्यसपछि अघिल्लो पङ्क्ति को चौथो मनका मार्फत सुई मुद्दा। त्यसपछि फेरि तीन मोती strung र दोस्रो मनका अघिल्लो पङ्क्ति को दोस्रो पाँच मा मुद्दा पास। यसबाहेक, wherein को यार्न पहिलो छर्रे मार्फत उत्पादन छ पङ्क्ति, अन्तमा माथि stringing को विधिहरू एकान्तरण, बुनाई जारी गर्नुपर्छ। अन्तिम श्रृंखला उज्ज्वल मोती देखि snowflakes कसरी बनाउने प्रस्तुत हुनेछ। एक नम्बर को सुरुमा पाँच एकाइहरु को राशि मा मोती डायल छ। अर्को, यो मुद्दा सही मुद्दा: चौथो पङ्क्ति मा तेस्रो मनका मार्फत, चौथो र तेस्रो को पाँचौं, दोस्रो श्रृंखला, चौथो र सातौं तेस्रो पङ्क्तिको छैटौं र सातौं माला मा दोस्रो त्रिकोण को शीर्ष। एउटै तरिका बुनाई मा श्रृंखला को अन्त सम्म जारी, र बाहिर मुद्दा तय भएको छ discharged। उत्पादन तयार छ।
निर्माण को माथि विधि एक नयाँ वर्षको सजावट मोती को धेरै समय लाग्छ, तर त्यहाँ छरितो विकल्प छन्। त्यहाँ बताउने कसरी मोती को एक हिमपात बनाउन विभिन्न योजनाहरू छन्, त्यसैले यसलाई एउटा मात्र संस्करण ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन। भिन्न मनके snowflakes, को वासस्थान वरिपरि हङ, यो originality ल्याउन हुनेछ र उत्सव मुड गर्न थप्नेछ।
Openwork मुकुट: crochet योजना
वेनिला स्काई: अभिनेताहरु र भूमिकाहरु
उद्यमी मा सामान को लेखा - यो पद्धति र लक्ष्य।
तंत्र "evroknizhek": के तिनीहरूले थाहा लायक छन्?
बाल रंग: छान्ने मुख्य सिफारिसहरू
Ovulation र कसरी यो गणना गर्न के हो? ovulation क्याल्कुलेटर
Clapboard रूपमा बालकनी SHEATHING? Sheathe बालकनी clapboard: मूल्य
तुर्क र आफ्नो विकल्प केही सुझावहरू